Sinikela ingqalelo yakho kunyaka, i-horoscope yezikali.
Yithanda uphawu lweesikali
Kude ngo-Oktobha 29, okhethiweyo wakho uza kuthatha inxaxheba ebalulekileyo kwimicimbi yakho yezezimali, uya kunceda ukujamelana nobunzima. Le mihla uya kufumana intshisekelo enomdla kwicala lobomi, ngakumbi ngo-Oktobha 24-25. Emva kwe-Oktobha 29, uza kuchitha ixesha elininzi kunye. Ukususela ngomhla we-3 ukuya ku-12 Novemba. NgoNovemba 3, zama ukuzigcina usesandleni - ukususela entukuthelweni ukuya kwisimo esiqhwithiyo isinyathelo esinye, oku kunokuchaphazela kakubi ubudlelwane. Emva koNovemba 8, uthando luya kuthatha indawo ebaluleke ngakumbi ebomini bakho, ekugqibeleni, kuya kuba nekhono lokurhoxisa i-angles ekhangelelene kulwalamano. Kuhle kakhulu ukucwangcisa umhla we-Novemba 13. Zama ukuphumla kunye, ukulibala malunga nomsebenzi kunye nobunzima bomsebenzi wanamhlanje. NgoNovemba 17, nangayiphi na imeko, musa ukuqala ingxoxo enzulu kunye nomntu okhethiweyo, yonke into ehambelana nobudlelwane buyi-taboo ngalolu suku. NgoNovemba 18 no-19, ungazami nzima ukutshintsha iqabane lakho, ngenxa yokuba uyibeke ingqalelo kwindlela ayenayo.
♦ Element: Air.
♦ I-talisman yenyanga: i-jade eluhlaza.
♦ Iintsuku ezithandekayo: Oktobha 27, 4, 8,
♦ iintsuku ezinzima: Oktobha 24, 31, 6, 13, 21 Novemba.
♦ Okuphambili kwezinto ezinomdla: ukufumana imali, ukuthenga, impilo, ukutya.
Izikali zomqondiso zokuthandana
Kuhle ukuchitha usuku apho unomdla, apho kukho ukuzonwabisa kunye nobuchule. Ingaba yinkampani yabantu abangavamile, apho ubude ufuna ukutyelela. Zama ukugqoka ukuze ugxininise intswelo yakho - vumela iingubo zibe nzima.
Imiba yasekhaya kunye neentsapho nayo ibalulekile kuwe. Nangona kunjalo, abayi kufuna kuphela amandla abo, kodwa neendleko. Ngoku ufumana into ebalulekileyo kunye nexesha elide, mhlawumbi kwindlu okanye indlu. Emva ko-Oktobha 29, kuya kufuneka usebenze ngokuthe ngqo kunye nezihlobo, mhlawumbi kunye nabamelwane bendlu. NgoNovemba 3, isimo sengqondo esinzima sichaphazela imeko yentsapho, akufanele ubenze ingqumbo okanye intukuthelo. Uninzi lwazo zonke, uza kubandakanyeka kwimicimbi yasekhaya ngoNovemba 10 no-11. 12, 13 no-14 uNovemba, zama ukuzinikela kubantwana, le mihla enhle kakhulu yokunxibelelana kunye nemidlalo.
Ubunzima buxhomekeke kwisimo sengqondo sakho esinoxanduva kumzimba wakho. Okubaluleke nakakhulu isimo sengqondo ngokuphila ngendlela enempilo, ukuphumelela kwesi siphumo kuya kuba. Ungayigxothi iindlela ezilula zokubuyisela. Ukunyuka kwelanga, iswayilo esahlukileyo, ukutya okutyukisiwe nge-vitamin kuyakuphakamisa ithoni.
I-Oatmeal isityebi kwi-biotype (B yeqela le vithamini), eluncedo kulusu kwaye inqanda isidumbu. Ubuninzi beeprotheyini kunye ne-fiber kwi-oatmeal kuphucula iinkqubo ze-metabolic, kukhuthaza ukukhula nokuphuhliswa kwezicubu ze-muscle.
Hlaziya izikali zomqondiso
Kule nyanga, uneshedyuli exakeke kakhulu, uzimisele ngokukwenza imali. Nangona kunjalo, ungazibali wena. Vumela ukuba uphumule kwiindawo zokutya kunye neevenkile. Ukutya okunonophelo kunye neziphuzo ezicocekileyo kuya kunceda ukhululeke kwaye uzive ukhululekile. Ukususela ngo-Oktobha 29, kuya kuba nomnqweno wokuhamba ngakumbi. Imini efanelekileyo yile ngesi-7 no-8 Novemba. NgoNovemba 9, yeka ukuhamba. Unokuqala uhambo olude ngo-Oktobha 26, kwaye umhla wama-27 ngumhla ongathandekiyo. NgoNovemba 1-2, udinga ubuncwane, ixesha lokuphumla kwihlabathi elihle.
Indawo yamandla yomqondiso weesikali
Iqela le-tea apho ungakwazi ukuphumla kwaye udibelele kwindawo elula. Imikhosi ye-Tea kunye neentlobo ezahlukeneyo zeemveliso ziya kunceda ufumane uxolo lwengqondo.
Phantse inyanga yonke uza kwenza imali, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuyifumana. Zithembele kuwe kuphela, unamandla aneleyo. Ukuba kukho iitalato, zinike, ubomi buza kunika ithuba lokufumana ngaphezulu. Funda ukuphatha imali lula, njengendlela kunye nomthombo wokuzonwabisa, ukuzizonwabisa. Kwimiba yezezimali, enye indlela okanye enye, iqabane lomtshato liya kuthatha inxaxheba. Mhlawumbi uqala ishishini elithile kunye nomntu. Imali inokuza ngokukodwa kwabo badibanisa namazwe angaphandle, umzekelo, usebenza kwizokhenketho, kwaye phakathi kweenhlanhla kunokuba ngabafundisi beyunivesithi. Yaye nangona usebenze okwangoku awunayo ibhondi engcono, kukho iimeko ezininzi, kwaye zizisa umphumo. Funda ukulungisa iingxaki ngokukhawuleza, kwindawo.
Ibhedi ecocekileyo kunye nemibala emihle iya kwamkelwa.
I-Mars kunye neMercury iya kunceda abantu abatsha baqhelanise, ngokulula, banomdla kwaye bachithe ixesha ekuhambeni nasekufundeni into engaziwayo. I-Mercury izakudala indawo efanelekileyo yokufunda, ukuthengisa amancinci kunye nokuseka oonxibelelwano nezihlobo. I-Neptune izakudala umoya wokuthandana nokuthandana nabathandekayo. I-uranium iya kukuxelela ukuba zeziphi iindlela zonyango olongezelelweyo oluya kuhlangabezana nezifo zakho ezingapheliyo.
Uthando. Unika iimvakalelo ezibaluleke kakhulu. Ngoku kuye, ayikho intlanganiso enothando kakhulu ebalulekileyo, njengento yokucwangcisa ubomi besikhathi esizayo kunye. Isisindo sinomdla ukuthetha ngendlu. Ncedisa iqhawe lakho, kwaye uya kubeka ithemba lakhe ngonaphakade.
I-Tonus yesibonakaliso semali
Ngoku akayena mbandela, kodwa kunjalo unokuba nefuthe-ikakhulu ngokukhokelela kwimpilo enempilo. Le nyanga, ukondleka kubalulekile. Imihla engcono kakhulu ngoNovemba 5-7. NgoNovemba 15, ungayeki naziphi na iinkqubo zonyango okanye izimonyo.
Izilinganiso zempawu zeMali
Ixesha lokuba ubuyele kwiinyawo zakho ngemali, ngoko khuthaza iinzame zomnyuli ukwenza imali. Unokuzicwangcisa ishishini lakho, wenze imali yokulondoloza ikamva. Kukulungele ukutyalomali kwi-estate estate.
Yonke ixesha liya kunikwa imali yokwenza imali. Ngelishwa, ngoku ayilona xesha lilungele ukuphunyezwa kobugcisa, kodwa kufuneka uyiphathe ngokuzinzile - yonke into inexesha layo. Uhambo lwezoshishino lunokwenzeka.
Amanqaku omqondiso wesibini
Ukhululekile ngokupheleleyo ekuxoxaneni nabahlobo kwaye unokukhetha ukhetho olunjalo lweentlanganiso, ekulungeleyo kuye. Ngomnye wabo, iiprojekthi zezimali ezidibeneyo ziyakwazi ukuvulwa kweso sibini. Kubalulekile ukuyeka ukuthetha ngo-Oktobha 30, kwaye iintsuku eziseleyo ziya kuhambelana ngokupheleleyo.
Izikali zesaziso zokuzonwabisa
Kuyinto enqwenelekayo ukuphumla, kungekhona ukugcina imali, ukudala umuzwa wokuthuthuzela ngokupheleleyo. Uhambo olufutshane ukuya kwiindawo ezithakazelisayo ziyakwamkelwa, kukhethwa ngemoto. Kufuneka kwenziwe okungafani ngoNovemba 9, kungcono ukuhamba ngeenyawo. Ukuba uhamba uhambo olude, ngaphandle kwe-Oktobha 27. NgoNovemba 1-2 uya kufuneka abe yedwa.
Ukuthanda umlingo, uthando luyabetha
Eyona ntsuku evuyayo kakhulu ngo-Epreli
I-vampire yamandla ngomhla wokuzalwa: uvavanyo (ukubalwa kwe-intanethi)
Ikhukhi yonyaka omtsha kunye nesinamoni
Ukwabelana ngesondo xa ukhulelwe
UZemfira ubona ukubonakala kwakhe ekuphumeleleni kweVladimir Pozner
Umzimba wangaphandle owe ejongeni lomntwana
I-LINDINET yokukhulelwa komzimba - ukukhulelwa komzimba ngokusemthethweni
Isonka kunye neekhonksi zeebona
Iingoma malunga neekati neenja
Yithini imidwebo yabantwana?
Ukufunda ukubhala i-letter back to man